MZ members' gmail လိပ်စာများ- စာမျက်နှာ3— MYSTERY ZILLION
MZ members' gmail လိပ်စာများ
my gmail is [email protected] :101::101::101::101::101::101::)):)):)):)):)):)):))
အိန်စတိမ်း . . .
လူဆိုး သိပ် သိပ် ဖွတာပဲ။ သီးလေးသီးထက်တောင် ရယ်ရသေးတယ်။ :d:d:d
အဲဒီသူခိုးကို ဒီနေရာကနေ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရှုံ့ချလိုက်ပါတယ် ။ အီးမေးတွေခိုးနေတာတွေ ရပ်တန်းကရပ်ဖို့ တောင်းဆိုပါတယ် (ဘာလိုလိုနဲ့ ဘန်ကီးမွန်နဲ့တူလာပြီ)။:d
ကျနော်ဆို ပက်ဝေါ့ ကို တို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို ဘားဂလစ် နဲ့ပေးထားတာ။
နောက်ဆုံးနည်းကတော့ မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်နဲ့ ပက်ဝေါ့ ပေးနေတဲ့အချိန် ၂၄ ပစ္စည်း9ခေါက်တော့ ပြည့်အောင် ရွတ်ပေးပေါ့။
သူခိုးကိုလဲ အထင်မသေးနဲ့။ သူလည်း မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန််နဲ့ ပက်ဝေါ့ဖောက်တိုင်း အင်ဂုလိမာလသုတ် ရွတ်တတဲ့။ ပက်ဝေါ့ မြန်မြန်ထွက်အောင်လို့တဲ့။
ဘာမှန်းမသိလိုက်ပဲကို ခိုးခံရတာပါ ညမီးအိမ် ရယ် .... :2:
Alexander လဲ Cyber မှာမသုံးပါဘူး။ မော်ကျွန်းမြို.မှာလဲ Cyber Cafe' မရှိပါဘူး။ Unicef ရုံးမှာ ... ကိုယ့် Laptop ပဲကိုယ်သုံးတာပါ။ gmail password လဲ Secure Password သုံးတာပါ။
account passwords တွေခိုးတဲ့လူကို invite လုပ်တယ်ဗျာ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပညာရှင် လို့ယူဆရင်; ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိတယ်လို့ ယူဆရင် ... ဒီမှာ လာဆွေးနွေးလိုက်ပါ။
ယောင်္ကျားတွေပဲ ... ကိုယ်ညံ့လို့ ကိုယ်ခံရတာ ... ကျေနပ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုညံ့တယ်ဆိုတာသိရရင် ပညာတိုးပါတယ်။ " Alexander thinks so "
ကိုAlexander ရဲ့မေးခိုးသုံးသူကို နာမည်မမေးမိလိုက်တာ ကျွှန်တော့ အပြစ်ပါ။ ပြီးတော့ ပညာရှင်တွေရဲ့ကြားမှာ ပြောမိတာလဲ ကျွှန်တော်ပါပဲ။ ရည်ရွယ်ချက်က Alexander ရဲ့မေးမှာပြန်ပို့ရင် ခိုးသုံးသူသိမှာဆိုးလို့ ဒီမှာပြောလိုက်တာပါ။
ဘာပဲပြောပြော အဲဒီကောင် က အစ်ကို့ရုံးက လူပဲဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူကပြောသေးတယ် ငါAlexander မဟုတ်ဘူ၊သူအပြင်သွားတယ်။ လို့ပြောတယ်။ဒါနှင့်ကျွှန်တော်က ကိုAlesander က ဒီလောက်ပေါ့ဆရ လားလို့မေးတော့။ မဟုတ်ဘူး ငါက သူအခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းပါ လို့ပြန်ဖြေတယ်။ ကျွှန်တော်တောင် စကားကောင်း ကောင်းပြောလိုက်မိတယ်။ Alexander မဟုတ်ပဲ ခုလိုလက်ခံစကားပြောတဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လို့ပြောလိုက်မိတယ်။
ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေကိုလဲ password မပေးကြပါနှင့်။ ခုလို သူများမေးကို ကြည့်တာ ကိုIstein ပြောသလို ပြောရမယ်။ ကျွှန်တော်တော့ထောက်ခံတယ်။
Alexander ကြည့်ချင်ရင် သူနှင် chat တုံးက chat history ရှိပါသေးတယ်။ ဒီမှာ မပို့တော့ဘူး ဘယ်မေးမှာပို့ပေးရမလဲ။???
မာနကြီးရတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်ကအွန်လိုင်းသိပ်မတတ်ဖြစ်လို့ပါ။ ( အော့ဖ်လိုင်းနေတာများတယ် :d ) ( ဘာမှမဟုတ်ဆင်ခြေဆင်လက်ဆင်ခြေထောက်ဆင်ခေါင်းများသာဖြစ်သည်။ ဟီးဟီး ) မာနကတော့တကယ်မကြီးတာအမှန်ပါ။ :6::103:
ကြံူသလို ၀င်ဖောခြင်းတစ်ခုပါ ခိခိ .......... အဲ့မီးအိမ်စုတ် တစ်ကယ်ကို အော့လိုင်းပြချက်တာသိလားး တစ်ခါတစ်ခါ သူ အော့လိုင်းပြလို့မနှုတ်ဆက်မိရင် အောက်သွားတာတောင် မပြောဘူးဆိုပဲ:14::14::14: ..........
မာနတော့ ကြီးမယ်မထင်ပါဘူး ရုပ်ကိုကြည့် ဥစ္စာချော ရုပ်ပေါလေး :65::65::65:
အဲ့ဟုတ်ပေါင် ဥစ္စာပေါ ရုပ်ချောလေးလို့ပြောသာ ........:77::77::77:
တစ်ခုရှိသေးဒယ် ဘာတဲ့ သူကိုယ်သူ mz ထဲမှာအချောဆုံးဆိုဘဲ :d:d:d
တော်ပြီ အမြန်လစ်မှ ကြောက်တယ် မီးမီးကြောက်တယ် ပြေးမှပဲ ...........
စိတ်ချိုးလားးးးးးးးးးးးးးးးးး ချောတီး ခိခိ
နှင်းဆက်ပိုင် wrote: »
အမကြီးဖြေးဖြေးလည်းပြေးအုံး။ တော်ကြာမိုးရွာထဲမှာ ထီးဆောင်းပြီး ငိုနေရအုံးမယ်။:d:d:d မီးမီးလေးနဲ့သူ့ဇာတ်လမ်း လူမသိမှာဆိုးလို့ ကြော်ညာကဝင်လိုက်သေး။ ):)):))နောက်တာနော အတည်ပြောတယ်ထပ်ထင်နေအုံး၊မယ်
ကိုညလေး ကမာနတော့မ ကြီးပါဘူး ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ် ရုပ်ကလည်း ဂျန်ဒေါင်းဂန်းတောင် မမှီပါဘူး (ချောတာမှလွန်ရော ရေညှိ နဲ့ ရှဉ့် ပေါင်းမွေး ထားရသလားလို့ ထင်ရတယ်)
ဪ ဒီကလေးမ သူလုပ်မှ MZ မှာ ငါအချောဆုံးဆိုတာသိတော့မယ် Top Secret လေ ကိုအိုင်းစတိုင်းကြီးသိလို့မဖြစ်ဘူး သူက သူ့ကိုယ်သူ MZ မှာအချောဆုံးလို့ထင်နေတာ အခုသူသိသွားပြီ ဝမ်းနည်းနေဦးမယ်။ :P ဂျပစီလေးက အမှန်တွေပြောတတ်သား
ဪ ဒီကလေးမ သူလုပ်မှ mz မှာ ငါအချောဆုံးဆိုတာသိတော့မယ် top secret လေ ကိုအိုင်းစတိုင်းကြီးသိလို့မဖြစ်ဘူး သူက သူ့ကိုယ်သူ mz မှာအချောဆုံးလို့ထင်နေတာ အခုသူသိသွားပြီ ဝမ်းနည်းနေဦးမယ်။ ဂျပစီလေးက အမှန်တွေပြောတတ်သား
ဟုတ်ပ။ ကျနော်ဒီသတင်းကြားတော့ တညလုံး မီးပိတ်ပြီး အိမ်ထဲမှာထိုင်ငိုနေတာ။ ဒီမနက်မှပဲ အငိုတိတ််တော့တယ်။ ကျနော်ဘယ်လိုမှ လက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ မနေ့ညကတောင် သောက်ရေခွက်ထဲ နှာခေါင်းနှစ်ပြီး ကိုယ့်ဟာ့ကိုသတ်သေမလားလို့စဉ်းစားလိုက်သေးတယ်။ နောက်မှ ကိုရီးယား နဲ့ ဂျပန် မင်းသမီးတွေအားလုံး မုဆိုးမတွေ ဖြစ်ကုန်မှာဆိုးလို့ မနဲ ဘရိတ်အုပ်လိုက်ရတယ်။:d
ကျွန်တော်ကတော့ သန့်ဇင်ပါ ... [email protected] ပါ ... ကျွန်တော်ကတော့ အကူအညီတောင်းတတ်တယ်နော် .... ကြိုပြောထားတာ ....:D:D
brangbee wrote: »
[email protected] ကိုပဲပို့ပါ bro.
ကျနော် password change ထားတယ်။ ထပ်ဖောက်လဲကိစ္စ မရှိပါဘူး )
[email protected] ပါ ....
e-mail ပေးတာတွေ မရပ်ကြသေးပါ့လား ပေးရင်တော့ ပေးကြနော်........ တော်ကြာ ဟက်ခံနေရဦးမယ် ကျွန်တော်တောင် တစ်ရက်တစ်ခေါက် ပြောငး်နေရတယ်.(ကြောက်လို့)
လူတွေကတော့ခက်တာပဲ ဒီလိုကိတ်စမျိုးကြတော့ ကန့်ကွက်တဲ့လူတယောက်တလေတောင်ပေါ်မလာဘူး။ ခါတိုင်း ဘာမဟုတ်တဲ့ ကိတ်စလေးနဲ့ Istein ကိုလိုက်ပြောနေတဲ့လူတွေကြတော့လဲ အခုကြတော့ ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက်နဲ့။ အခုလိုကိတ်စမျိုးကြတော့ ဝင်မပြောကြတော့ဘူးလား။ ပတ်ဝေါ့ အခိုးခံရမှာကြောက်လို့ထင်တယ်။ Istein တယောက်ထည်း အမိုက်ခံအမုန်းခံနဲ့ ဗိုက်ကမပူကျောကပူနေရတယ်။ ကာယကံရှင်တွေကလဲ တယောက်ကလဲ အဲဒီ ဟက်ကာကြီး(ဘန်းကျော်သားတို့အခေါ်) ကို တော်တယ်ဆိုပြီး မုဒိသာ ပွါးရတာနဲ့ နောက်တယောက်ကြပြန်တော့လည်း အဲလိုအလုပ်ခံရတာတောင် ခန်န္တီ တရားလက်ကိုင်ထားနေလေရဲ့။ Istein တယောက်ပဲ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ပဲထရူးနေတာ။ လုပ်ကြပေါ့ လုပ်ကြပေါ့ ဒီလိုစိတ်ဓတ်မျိုးတွေနဲ့။ ရင်လေးမိတယ်။
ကဲ Super Master HACKER ကြီးရေ ဆရာကြီးကိုပြောမိတာ sorry ပါ။ ဆက်တာလုပ် ရဲဘော်ရေ။။
ဘန်းကျော်ဆရာကြီးကိုစော်ကားမိတဲ့ ကျနော့ posts တွေကိုပြန်ဖျက်ပေးလိုက်ပါကြောင်း
ပို့လိုက်ပြီ ရလားမသိဘူး။ ရမှာပါနော်။
ဟုတ်ပ။ ကျနော်ဒီသတင်းကြားတော့ တညလုံး မီးပိတ်ပြီး အိမ်ထဲမှာထိုင်ငိုနေတာ။ ဒီမနက်မှပဲ အငိုတိတ််တော့တယ်။ ကျနော်ဘယ်လိုမှ လက်မခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ မနေ့ညကတောင် သောက်ရေခွက်ထဲ နှာခေါင်းနှစ်ပြီး ကိုယ့်ဟာ့ကိုသတ်သေမလားလို့စဉ်းစားလိုက်သေးတယ်။
မငိုပါနက် ကွယ် အဲ့လိုကြီးမလုပ်မသာတော်သေးတာပေါ့ရို့ :102::102:
ကိုအိုင်းစတိုင်းကိုလဲ အချောဆုံးလို့ ပြောပေးမယ်လေ \_:d/\_:d/\_:d/
မင်းကုသ နဲ့ နင်လာငါလားလို့ပြောပစ်လိုက်မယ် ဘာမှတ်ရဲ ဟီဟိ:71::71::71:
နောက်မှ ကိုရီးယား နဲ့ ဂျပန် မင်းသမီးတွေအားလုံး မုဆိုးမတွေ ဖြစ်ကုန်မှာဆိုးလို့ မနဲ ဘရိတ်အုပ်လိုက်ရတယ်။:d
အမယ်ငှီး ကိုရီးယားနက် ဂျပန်မင်းသမီးတွေကို သနားလိုက်သာနော် နာ့နှယ် ဟီး နောက်တာ ပြောင်တာ စိတ်ချိုးလား စိတ်ချိုးလဲ ဂုစိုက်ဘူး :p:p
ကြည့်ပါဦး။ ကြားလို့မှကောင်းကြသေးရဲ့လားလို့။ ကျွန်တော့်ကိုပြောတော့ စိတ်ချပါတဲ့။ နောက်တစ်ယောက်နဲ့ မဖောက်ပြန်ပါဘူးတဲ့။ ဒီမိန်းမတွေ တွေ့မှ မသေမချင်း ကလိထိုးသတ်ဦးမယ်။:5:
ကိုပျားရေ ............. ):)):))
ကျေးဇူး အများ ................... ကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ .... ။
ဒါပေမဲ့ ... မှားနေတယ် Bro.
ကျနော်က alexander.mz.mm ပါ။ ကိုပျား chat ခဲ့တာက alexandre.smart ပါ။ လူမှားသွားတာ ....
me: alexandre နေကောင်းလား MZ ကပါ
alexandre.smart: MZ ဆိုတာဘာတုန်း
Anyway, Anyhow ..... ပြောပြပေးတဲ့ ကိုပျား ကို ... ကျနော် Alexander မှ လှိုက်လှဲစွာ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း .............. :6:
Alexander gmail account Hacking လုပ် မခံခဲ့ရကြောင်း .........
Anyway, Alexander ရဲ. password ကိုတော့့ ပိုပြီး secure ဖြစ်အောင် ပြန် change လိုက်တယ်။
အရင် password လဲ secure password ပေးထားတာပါ ( "Princess wa!8" ). ခုတော့ အဲထက် secure ဖြစ်မယ်ထင်တာ change လိုက်ပြီ။ ( ဘယ်လောက် စိတ်ချရမလဲတော့ မသိသေးဘူး )
:dကျွန်တော် mail ကတော့ [email protected] ပါ:d
Alexander က ဘယ်နှစ်ယောက်တောင်ရှိလဲဗျား။ ကျွှန်တော်သိတာ ဒီတစ်ယောက်တည်းကို ဘာလို့၊ဘယ်က နောက်တစ်ခု ပေါင်းမိပါလိမ့်။ Alexander ရေ ဟုတ်တယ် ကျွှန်တော့ friend list မှာကြည့်တော့ နှစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်။ Alexander ကို လူအများကြားမှာ သတင်းအမှားကို ပြောမိတဲ့ ကျွှန်တော် ကိုပျား က၊ လူအများရဲ့ကြားမှာပဲ တောင်းပန်ပါတယ်။ အရှက်ရစေရင်လဲ ခွင့်လွှတ်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။:77::77::77:
ကျွန်တော်ကတော့ member အသစ်လေးပါ
ကျွန်တော့ gmail လိပ်စာကတော့ [email protected]
ကျွှန်တော့်လိပ်စာက [email protected] ပါ ..
Gtalk မှာတွေ့လို့ မသိတာတွေမေးရင်ဖြေ ပေးရမယ်နော်..:P
ကျွှန်တော်သိတာတွေလည်း Share ပါ့မယ်...:)
mg mg moe nyunt
[email protected] မှာတွေ့ကြမယ်လေ. knowledge တွေ ဖလှယ်ကြတာပေါ့:65::6::5:
mg mg moe nyunt wrote: »
အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှ နှစ်ပိုင်းထားရမယ်. တစ်ပိုင်းကို ဒီနေ့သောက်ပါ. နောက်တစ်ပိုင်းက နောက်တစ်နေ့သောက်ဖို့ပေါ့.
ကျနော်ဆ၇ာလုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဆရာလုပ်ရအောင်လဲဘာကောင်မှမဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာဘယ်သူမှ mail တွေမပေးကြပါနဲ့တော့(အထူးသဖြင့် member အသစ်တွေပေါ့)။ပေးချင်တယ်ဆိုရင် PM ပို့မယ်ဆိုပိုအဆင်ပြေမလားမသိဘူး။
phyupankhat mail ကိုမ add ကြပါနဲ့တော့နော်။ အဟက်ခံလိုက်ရပါပြီ။ password ပါ ပြောင်းသွားလို့ ကိုယ့်ဘာသာတောင်၀င်လို့မရဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီမေးလ်နဲ့တစ်စုံတစ်ခုပေးပို့လာခဲ့ရင်လဲ ဖြူပန်းခက်ပို့တာမဟုတ်ပါကြောင်း။ လူဟောင်းတွေကိုတော့ မေးလ်အသစ်မှာပြန် add ပါ့မယ်။ ဒီမှာတင်ပြီးမှ add တဲ့လူတွေတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် PM လေးပို့ပေးကြပါ။ ပြန် add လိုက်ပါ့မယ်ရှင်။ မေးလ်အသစ်ကိုတော့ မတင်ရဲတော့ဘူး။နားလည်ပေးကြပါရှင်။ (:((:((:((:((
bf ur mail is hacked, did ya get any malicious mail???
frm ur gtalk, did someone giv ya some links???
google has the image XSS vuln and haven't fixed yet.
when u go to images,
then, search something eg~ hacking
so many things will appears
then, click on something.
according to this link, look this following link
instead of this address, change some sites
u'll see it works.
eg~ i redirected the link to my site as follows
and the link become
so, when u follow this link, u'll reach to my site
if the attacker redirect this link to his cookie stealing page and send it to you and if you followed this link and ur gmail is currently signed in,
then, u got hacked and it's the power of XSS
then when he get access rights to ur acc, what can he do???
he can make so many things and it's up to him.
he can root ur another profiles frm friendster(if u hav and store it in ur mail), he can steal it easily. moreover, he also can backdoor on you and also can trojan on you.
or did ya access ur mail via some proxies or phishing sites???
or didn't ya sign out properly ur g talk???
there maybmany ways...!
according to ur weakness of security related knowledges or the weakness of the strength of ur password
for the poor passwd length, attackers can perform their attacks by using exploits such as gmailbrute etc...
so, i'd like2suggest ya that keep intouch with the security and hacking related sites such as securityfocus, defcon etc....!
moreover, u always should the cache of ur browser after ur surfing.
btw, if ya hav no mood to use ur previously hacked mail, may i test it???
(juz for tracing and educational purpose)
(but, i won't giv ya back coz i'magmail collector )
if ya would like to get back ur previously hacked mail, test it with gmail brute.
i recommend it and it works 100%.
i posted it in this forum and don't remember. so, just google urself
အားလုံးက good friends တွေပါ .... :):)
I do appreciate all my MZ friends.
အီးမေးလိပ်စာပေးရင်၊ Spam Bot တွေ ဖတ်လို့မရအောင် ဒီလိုရေးပေးပါ။
ကျွန်တော့်လိ်ပ်စာက [email protected]ပါခင်ဗျာ။ invite လုပ်ပေးပါနော်
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လည်း အဲသလိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာ။ ကြောက်စရာကြီးနော်
သီရိ ဂျီမေးကတော့ myathiri19 [အက်]ဂျီမေး[ဒေါ့]ကွန် ပါ... အားလုံးနဲ့ ခင်ချင်ပါတယ်ရှင်...
ကျွန်တော်လိပ်စာက [email protected]
add ပြီး block မ လုပ်နဲ့နော်:)):)):103:
တားတားရဲ့ဟာက [email protected] ပါ......၊
ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ် (ကွန်ပျူတာအကြောင်းနော်)၊ မဆိုင်တာတွေဆို Sorry (အဟီး.....စိတ်၀င်စားတာ လူမသိအောင်လို့)
နတ်ပြည်က နတ်ကြီးတောင် email address ပေးမှတော့ ကျနော်လဲပေးလိုက်ပါဘီ:D
နောင်တော်ကြီးရေ ဟက်ခံထိဦးမယ်နော် ဒီဟက် က hack မဟုတ်ဘူး heart လို့ပြောတာ (မပီလို့) ဟဒ်ထိသွားမယ်လို့
ကိုအိုင်းစတိုင်းရေ..။ ကိုအိုင်းရဲ့ အောင်သွယ်တော်ဟောင်းကြီးက ကိုအိုင်းရဲ့ အီးမေးကို လိုက်စုံစမ်းနေတယ်ဗျ..။:d:d:d
I will invite again to all old friends to this email.
[email protected] ပါခင်ဗျာ
အနော် mail က [email protected] ပါ ။:67:
ကျွန်တော့် gmail လိပ်စာပါ။ [email protected]
ကျွန်တော်လဲပါ မယ် ဗျို့။
[email protected] ကို ၀င်ခဲ့ပါ။
:6:အစဉ်ထာ၀ရ ကြိုဆို နေပါ တယ် ခင်ဗျာ။:6:
(နဲနဲ တော့ အမေးအမြန်းထူတယ်နော်။ ):P
အနော်လောက လဲ ပေးထားမယ်ဗျာ မ add ပဲ မနေကြပါနဲ ့နော်:D
:103:my gmail adress,[email protected]
မိုးသက်ထား email က [email protected] ပါ ။ :5:
Welcome all friends.
[email protected] :77: :68: (
[email protected] တဲ့ add ထားကြဦးနော်....ခင်တက်ပါတယ်....:77:
my e-mail address is [email protected]:6: